Nahemotra amin'ny fomba ofisialy ny Firefox 11 Avy amin'ny Linux
Ao amin'ny Blog Mozilla Johnathan nightingale dia nanao ofisialy ny vaovao fa Firefox 11 nahemotra ny fandefasana azy ary noho izany tsy maintsy miandry andro vitsivitsy isika.
Isaky ny enina herinandro dia misy fiaran-dalamby Firefox iray miala ao amin'ilay gara. Amin'ity herinandro ity isika dia hamoaka fanavaozana hafa, fa tsy amin'ny talata toy ny fanaontsika mahazatra. Misy antony roa amin'izany:
Ity talata ity dia ny fanavaozana an'i Microsoft isam-bolana ho an'ny Windows, ary ireo fanavaozana ireo dia nifandray tamin'ny fanavaozana anay teo aloha. Tsy manana antony tokony hiandrasana olana manokana amin'ny fanavaozana ity volana ity izahay, fa aleonay maka iray na roa andro hahalala ny vokany alohan'ny hanavaozantsika ny mpampiasa rehetra.
Miandry ny tatitra avy amin'ny ZDI ihany koa izahay momba ny fahalemen'ny fiarovana mety hisy fiatraikany amin'ity kinova Firefox vaovao ity. Manantena izahay fa handray ny tatitra amin'ny alatsinainy hariva. Raha vantany vao afaka manombana ny fahalemena isika, dia ho fantatsika raha mila mampiditra fanamboarana ao amin'ny Firefox isika alohan'ny hamoahana ny fanavaozana.
Hanavao ny lahatsoratray eto izahay raha vantany vao misy izao ny kinova farany an'ny Firefox. Mandritra izany fotoana izany, raha te-hijery mialoha izay ho avy amin'ny kinova Firefox ianao amin'ny manaraka, dia zahao ny iray aminay fantsom-panafahana aloha.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fanemorana dia noho ny antony roa:
Io Microsoft androany dia mamoaka fanavaozana ny Windows izay Firefox mety hisy vokany eo io.
Miandry tatitra momba ny fiarovana avy amin'ny ZDI izy ireo, amin'izay hahitan'izy ireo raha mila manavao ny kaody browser izy ireo, mba tsy hamoahana ny kinova 11 anio ary ao anatin'ny roa andro latsaka dia mila fanavaozana vaovao izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Nihemotra tamin'ny fomba ofisialy ny Firefox 11
Ny zavatra mahatsikaiky momba izany dia avy amin'ny FTP an'i Mozilla raha afaka maka ny kinova 11 ianao:
Azo atao foana ny misintona 3 na 4 andro mialoha, saingy amin'ny fomba ofisialy dia toy ny hoe tsy teo izy io.
Eny, fa ny olana dia, araka ny lahatsoratra tao amin'ny bilaogy Mozilla, mbola ho hita eo raha tsy miteraka olana ny fanavaozana miaraka amin'ny M $ ary raha toa ka asehon'ny tatitra momba ny fiarovana fa milamina ny zava-drehetra ..
Mandoto ireo microsoft aho…. Andao hiandry ny hivoahan'ny patch tampoka ... na izany na tsy izany dia halefako ilay napetrak'i @elav hanandramana azy hehe
Efa nandramako io raha ny marina ary araka ny nolazaiko tao amin'ny lahatsoratro hafa, tsy misy manasa ahy hitifitra balafomanga
Tsy fantatro ny antony nahatonga ny firefox ho lasa versionitis maranitra tato ho ato, manjary manelingelina, amin'izao fotoana izao dia hahatratra 100 izy ireo, aleoko ny fanavaozana malefaka kokoa, ny fanovana dia lasa mahasosotra.
Misaotra ny varotra chrome sy ny olona tsy mahita ny isa kinova fotsiny.
Izay no antony tsara nametrahako ny ddg.gg ho pejy fandraisana, halako io dokambarotra milaza hoe mametraka chrome io.
tantara dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa mahatadidy zavatra mitovy amin'ny slackware izay niova tamin'ny kinova 4 ka hatramin'ny 7, mba tsy ho toy ny rafitra taloha miaraka amin'ireo distro linux hafa
ARES dia hoy izy:
Misaotra an'i Chrome fa tsy Google, tsy nisy nanery an'i Mozilla hanao zavatra, tompon'andraikitra amin'ny hetsika ataony ny tsirairay. Raha manipy lohasaha i Pedrito dia tsy ho an'i Juanito izany satria nitsambikina aloha izy ary tsy maintsy naka tahaka azy i Pedrito.
Ankoatr'izay, tranga samihafa be izy ireo. Chrome dia tsy manao doka na mampiseho ny isany na mampiseho ny famoahana kinova. Ary ho an'ny INRI bebe kokoa dia tsy voamariky ny mpampiasa ny fanavaozana azy ireo satria kely noho ny tsy miditra an-tsehatra izy ireo. Toy ny hoe nitsambikina i Pedrito ary namono tena tamin'ny tany, ary i Juanito kosa nitsambikina niaraka tamin'ny parachute tamin'ny kidoro fiaramanidina.
Valiny tamin'i Ares
Eny, efa miaraka amin'ny firefox 11 aho ary tsy mahita na inona na inona intsony lol…. raha ny marina, tsy niaraka tamin'ny hoditra chrome…. : P, izany hoe, tsara miaraka amin'ny lohahevitra Tango nohavaozina nanomboka ny 12 martsa, tsy maintsy afindrafindra tanana fotsiny ilay lohahevitra.
lordix dia hoy izy:
Ny endrika vaovao dia ny firefox 13, azoko izany.
Mamaly an'i lordix
Misy Jupiter 0.1.2 voasoratra ankehitriny ao amin'ny Python